Komishanka UN-ka mar dambe uma arko xashiishadda inay tahay daroogada halista ah ee maandooriyaha ah • Dawooyinka Inc.eu
Guddiga daroogada mukhaadaraadka (CND) wuxuu diiradda saarayaa tirtirka marijuana iyo waxyaabaha ka soo jeeda liiska IV ee heshiiskii 1961 ee ku saabsanaa mukhaadaraadka daroogada, kadib talooyin taxane ah oo ka yimid Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
Liiskani waa mid wakhtigiisii ​​dhammaaday, xashiishaduna waxay la mid tahay dilaaga, opioids qabatinka leh oo ay ku jiraan heroin. 53-da dal ee xubnaha ka ah CND ayaa u codeeyay - iyadoo 27 ay taageereen, 25 ay diideen halna uu ka aamusay - in laga saaro xashiishadda shuruucda iyo qawaaniinta ugu adag, kuwaas oo xitaa ka niyad jabay u isticmaalkeeda arrimo caafimaad. Tani waxay u fureysaa albaabka in la aqoonsado awooda daawaynta iyo daaweynta ee si ballaaran loo isticmaalo laakiin wali si sharci darro ah daroogada madadaalada.
1 Aqoonsiga awooda caafimaad waxay albaabka u fureysaa cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan xashiishadda
2 Shuruucda iyo caafimaadka bulshada ee ku saabsan xashiishadda
Aqoonsiga awooda caafimaad waxay albaabka u fureysaa cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan xashiishadda
Intaas waxaa sii dheer, go'aanka ayaa sidoo kale keeni kara cilmi baaris dheeraad ah oo cilmiyaysan oo ku saabsan astaamaha daawada ee geedka waxayna u noqon kartaa dariiqa dalalku u sharciyeeyaan daroogada isticmaalka daawada. Waxa kale oo jirta fursad ah in dalal badan ay dib uga fiirsan doonaan sharciyada la xiriira isticmaalka madadaalada ee xashiishka.
Bishii Janaayo 2019, WHO waxay soo bandhigtay lix talobixin oo ku saabsan qorshaynta xashiishadda ee heshiisyada UN-ka ee xakamaynta daroogada. In kasta oo soo jeedimaha markii hore loo codeeyay fadhigii Maarso 2019 ee CND, dalal badan ayaa codsaday waqti dheeri ah si ay u darsaan ansixinta una qeexaan mowqifyadooda. Mid ka mid ah qodobada WHO wuxuu ahaa kororka qarxa ee iibka cannabidiol (CBD). Maadadan aan sakhraansaneyn kuma xirna kontaroolada caalamiga ah. Taasi waa inay isbedeshaa. CBD wuxuu caan ku noqday sanadihii la soo dhaafay. Tani waxay dhalisay warshad balaayiin doolar ku fadhida adduunka oo dhan. Waqtigaan la joogo, in kabadan 50 wadan ayaa qaatay barnaamijyada xashiishka ee dawada, halka Kanada, Uruguay iyo 15 gobal oo Mareykan ah ay sharciyeeyeen isticmaalkooda madadaalada, iyadoo Mexico iyo Luxembourg ay qarka u saaran yihiin inay noqdaan wadamada seddexaad iyo afaraad ee sidaas sameeya.
Shuruucda iyo caafimaadka bulshada ee ku saabsan xashiishadda
Codeynta kadib, wadamada qaar waxay sameeyeen hadallo ku saabsan mowqifyadooda. Ecuador waxay taageertay dhamaan talooyinka WHO, iyagoo ku adkeysanaya soo saarista, iibinta iyo isticmaalka xashiishada “inay leeyihiin qaab dhismeed nidaamiya oo xaqiijinaya ku dhaqanka wanaagsan, tayada, hal abuurka iyo horumarinta cilmi baarista”. Dhanka kale, Mareykanku wuxuu u codeeyay in xashiishadda laga saaro Jadwalka IV ee heshiiska keliya iyadoo lagu sii hayo Jadwalka I. Xashiishadda waxay sii wadaa inay khatar weyn ku hayso caafimaadka bulshada waana inay ku sii jirtaa xakamaynta heshiisyada caalamiga ee xakamaynta daroogada. Liiska XNUMX-aad waxaa ku jira maaddooyin leh waxyaabo la qabatimay, oo halis weyn ugu jira xadgudub. Liiska IV wuxuu ka kooban yahay walxaha ugu halista badan, kuwaas oo horeyba ugu jiray liiska I, kuwaas oo si gaar ah waxyeello u leh oo leh qiime caafimaad iyo mid daaweyn oo xadidan. Liiska IV ayaa sidaas ah qaybta ugu culus. Cannabis meel kuma laha taas.
Chile way ka soo horjeesatay, iyo waxyaabo kale, sababtoo ah "waxaa jira xiriir toos ah oo u dhexeeya isticmaalka xashiishka iyo halista sii kordheysa ee niyadjabka, cilladaha garashada, walwalka, astaamaha cudurka maskaxda." Japan waxay sheegtay in isticmaalka aan daawo lahayn ee dhirta "ay u horseedi karto caafimaad xumo iyo cawaaqib xumo bulsho, gaar ahaan dhalinyarada". Ka-hortagga iyo macluumaadku waa inay noqdaan tiir muhiim u ah siyaasadda.
Akhri wax dheeraad ah news.un.org (Source, EN)
cannabisCBDsharci-dejintaAdduunka oo dhansharciga
Ka fikir adduun halka nanbot yar ay si toos ah ugu gudbinayaan cannabinoid-kaaga endocannabinoid ...
Sannad Wanaagsan! Ujeeddooyin wanaagsan 2021? Akhriso 6da fikradood ee xashiishka laxiriira sanadka cusub
Marka ugu horeysa, waxaan kuugu rajeynayaa magaca kooxdayada DrugsInc! Ma isku dayi doontaa sanadkan cusub sidoo kale ...